Wararka - Sidee loo doortaa shey dabiici ah oo dabacsan oo dabiici ah?
1. Maxay tahay in la tixgeliyo marka laga iibsanayo qalabka isku dhejisan ee dabiiciga ah khadka tooska ah? Sidee loo sameeyaa xulashada saxda ah?
Iibsiga khadka tooska ah ee walxaha ku-xirnaanta dabiiciga ee macnaheedu yahay in sheyga laga iibsado websaydhka warshadaha. Sidaa darteed, waxaa jira tixgelinno quseeya ama dhinacyo u baahan in laga fiirsado. Intaa waxaa dheer, haddii ay la xiriirto iibsashada alaabta, waa tixgelin muhiim ah oo lagama maarmaan ah, taas oo ay tahay in diiradda la saaro. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo arrimaha, sida asalka alaabta, qeexitaannada iyo moodellada, cabbirka, xuduudaha, tayada wax soo saarka iyo qiimaha, iyo sidoo kale soo saaraha.
Haddii aad rabto inaad hesho xulasho sax ah, waxaad u baahan tahay inaad sameyso labada qodob ee soo socda: marka hore, waxaad u baahan tahay inaad qabato waxoogaa shaqo ah oo diyaarin ah ka hor intaadan soo iibsan alaabada, si aad u ogaato waxaad taqaan; tan labaad, markaad wax soo iibsaneysid, waa inaad tixgelisaa dhammaan arrimaha khuseeya, waana inaad leedahay tixgelin dhameystiran, si aad uhesho xukun sax ah. Labada qodob ee kor ku xusan waa lagu guuleysan karaa.
2. Soosaarayaasha qalabka fiilooyinka dabiiciga ah ee dabacsan ma u baahan yihiin caddeyn xoogaa ah?
Soo-saareyaasha qalabka fiilooyinka dabiici ah ee dabacsan ayaa u baahan inay fuliyaan waxoogaa shaqo caddeyn ah, maxaa yeelay shaqadani waxay keeni kartaa faa'iidooyin qaar, sida hagaajinta tartanka soo-saareyaasha iyo alaabtooda suuqa, iyo hagaajinta faa'iidooyinka dhaqaale ee soo saarayaasha. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in si dhab ah loo qaato shaqadan. Intaa waxaa dheer, waxaa jira laba dhinac oo ku lug leh maaraynta tayada.
3. Maxay yihiin shuruudaha gaarka ah ee aasaasiga u ah walxaha ku-xirnaanta dabiiciga ee dabacsan?
Qalabka furitaanka dabiiciga ah ee jilicsan, oo leh qaar ka mid ah shuruudaha gaarka ah iyo aasaasiga ah ee alaabooyinka, waa: isticmaalka tamarta oo hooseeya ee qalabka, moodooyinka kala duwan iyo qeexitaannada, qiimaha nidaamka oo hooseeya, qalabka kala duwan ee la farsameynayo. Marka la eego habka hawlgalka, waxaa loo shaqeyn karaa si isdaba-joog ah ama aan kala go 'lahayn, kharashka hawlgalkuna wuu hooseeyaa hawlgalkiisuna waa mid sahlan oo sahlan. Codsi ahaan, qalab noocan oo kale ah ayaa loo isticmaali karaa dhinacyo badan. Soosaarayaasheeda, tayada wax soo saarka waa la damaanad qaadi karaa oo sheyga waa loo habeyn karaa sida loogu baahan yahay.